PEACEFUL PA: November 2011
ပျော်ပျော်နေပါ။ BE HAPPY!
လောကမှာ လူတွေပျော်နေကြပါသလား။ အများစုကတော့ဝမ်းနည်းနေ၊ ညည်းတွားနေ၊ စိတ်ပျက်နေကြတာပါ။ ခဏတာ လူ့ဘ၀ကလေးကို ပျော်ပျော်မဖြတ်နိုင်ဘဲ ၀မ်းနည်းစွာ ဖြတ်နေကြရတာပါ။ နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ရာကတော့…
“ငွေ ကိုတပ်မက်ခြင်းသည် မကောင်းသောအမှု အပေါင်းတို့တွင် မူလအမြစ်ဖြစ်သတည်း။” လို့ ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ ငွေမက်တော့ မကောင်းတာလုပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ငွေမက်တော့ ပူပန် စိတ်တွေ ၀င်လာပြီး မပျော်နိုင်ဖြစ်ရတာပါ။
“ဆူအောင်ကျွေးသော နွားတစ်ကောင်လုံးကို အချင်းချင်းအငြိုးထား သောစိတ်နှင့် စားရသည်ထက်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါသော ဟင်းရွက်တစ်နပ်စာသည် သာ၍ ကောင်း၏။” လို့ ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် “စားရန်၊ ၀တ်ရန်ရှိသမျှနှင့် ရောင့်ရဲလျက်နှင့် နေကြကုန်အံ့” ဆိုတဲ့ ကျမ်းစကားလိုနေကြရင်တော့ အတော် အတန်ပျော်ရွှင်လာနိုင်မှာပါ။
တွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မှာ လူတွေရဲ့သဘောထားပုံ နှစ်မျိုးကွဲ နေပါ တယ်။ အကောင်းမြင်သဘော Positive thinking နဲ့ အဆိုးမြင်သဘော Negative thinking တို့ပါပဲ။ ကလေးနှစ်ယောက်ကို လိမ္မော်သီး တစ်လုံးစီ ပေးတဲ့အခါ၊ တစ်ယောက်က လိမ္မော်သီးတစ်လုံးစား ရလို့ ပျော်နေတယ်။ ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ နှစ်လုံး မရ လို့ စိတ်ညစ်နေတယ်။ နွားနို့ ဖန်ခွက်တစ်ဝက်စီ ဝေတိုက်တော့၊ တစ်ယောက်က ခွက် တစ်ဝက်သောက်ရလို့ ပျော်နေတယ်။ ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ နှစ်ယောက်ဝေရလို့ တစ်ဝက်ပဲရတယ်ဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေပါတယ်။
နှင်းဆီခြံနားဖြတ်သွားကြတော့ တစ်ယောက်က “နှင်းဆီပန်းတွေလှလိုက်တာ၊ အတော်မွှေးမှာပဲ” ဆိုပြီး ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ “ဆူးတွေနဲ့နော်၊ စူးလိမ့်မယ်” လို့စိုးရိမ်နေပါတယ်။ တောအုပ်တစ်ခုကို ဖြတ်သွားကြရာမှာတော့ ပျားအုံတစ်အုံတွေ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်က “ပျားရည်ရှိလောက်တယ်။ အတော်ချိုမှာပဲ” တဲ့။ ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ “ပျားတုပ်မယ်နော် သတိထား” လို့စိုးရိမ်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀၊ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်တဲ့အခါ အကောင်းမြင် သဘော နဲ့ကြည့်ပါ။ အတော်အတန်ပျော်ရွှင်လာနိုင်မှာပါ။
ကျွန်တော်တော့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်အားယူထားပါတယ်။ အကူအညီလိုသူ၊ အခက်ခဲကြုံသူ၊ ဝေဒနာခံစားနေရသူ၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်သူတွေအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဖို့ အားခဲထားပါတယ်။ ဒီလိုပေးလှူကူညီရာမှာ ဘာသာရေးအဆောက်အဦးတွေထက် ဘာသာဝင်လူတွေကို ပိုပေးလှူကူညီဖို့မြင်တတ်ရပါမယ်။ “ဘာသာတရားက တအားချမ်းသာနေပြီး၊ ဘာသာဝင်တွေဆင်းရဲနေရင်၊ အဲဒီဘာသာတရားဟာ အမှောင်ဖုံးနေပြီ”လို့ Dr.Curtis Hutson ကဆိုပါတယ်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးတော့ ဟိန်းနေအောင် ဆောက်ထားကြပေမယ့်၊ ဘာသာဝင်မုဆိုးမတွေ၊ မိဘမဲ့၊ မသန်မစွမ်းသူတွေ၊ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မဲ့သူတွေ စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ဖြစ်နေကြရင် ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အဓိကစေတနာက သူချစ်တဲ့လူသားတွေကို ချစ်ကြ၊ ကြင်နာကြ၊ ရိုင်းပင်းကြဖို့ပါ။
ကောင်းတာတွေ ကြိုးစားလုပ်တဲ့အခါ၊ ထူးခြားတာက ကိုယ်မကောင်းတာကို ပိုသိလာတာပါဘဲ။ ကိုယ့်အသိစိတ် Conscience ကပြောလာတာပါ။ ကောင်းတာတွေ လုပ်လေလေ၊ ကိုယ်မကောင်းမှန်းသိ လာလေလေပါ။ တစ်ချို့က “ငါက အခုသာ ကောင်းတာမလုပ်ဖြစ်သေးတာ။ တစ်ချိန်ကျရင်တော့ ကောင်းတာတွေလုပ်ဦးမယ်´ လို့ ပြောတတ်ပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်မကောင်းတာကို ပိုပိုသိလာမှာပါ။ ဒါကြောင့် “ကုသိုလ်တပဲ ငရဲတစ်ပိဿာ” လို့ သတိစကားလေး ရှေးလူတွေ ထားခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီတော ကောင်းတာလုပ်ပေမယ့် ပျော်သလားဆိုတော့ အမြဲမပျော်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအပြင် ကိုယ်ကျေးဇူး ပြုသူတွေထဲမှာ သစ္စာမရှိသူတွေ၊ ကျေးဇူးမသိသူတွေ အကောင်းမမြင်တတ်သူတွေလည်း အများကြီးရှိနေနိုင်သေးတယ် မဟုတ်လား။
၄။အမြဲတည်မယ့် အရာတွေကိုရှာပါ ။
မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေဟာ မမြဲပါဘူး။ မမြင်ရတာတွေက မြဲပါတယ်။ မြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ မမြဲပါဘူး။ အဲဒီကိုယ်ထဲက ၀ိညာဉ်ကတော့ ထာဝရတည်မြဲနေပါတယ်။ လက်ရှိ လူ့ဘ၀ဟာ ခဏတာပါ။ တမလွန်ကတော့ ထာဝရပါ။
အပြစ်ရှိလို့ ငရဲသွားထိုက်ပေမယ့် ဘုရားကကယ်မလို့၊ ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့် ငရဲမသွားရ၊ ကောင်းကင်ရောက်မယ်လို့ စိတ်ချရရင်ပျော်စရာပါ။ ဒီလိုပျော်ရအောင် ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါပြီ။
ဘုရားသခင်ရဲ့ တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို ဒီလောကထဲလွှတ်ပြီး၊ လူတွေအတွက် ကိုယ်စားအသေခံပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့နေ့ကနေ-သေတဲ့နေ့အထိလုပ်တဲ့ အပြစ်တွေအားလုံးရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကတော့ သေဒဏ်ပါ။ အဲဒီသေဒဏ်ကို ကိုယ်စားအသေခံပေးခဲ့တာပါ။ လူစားထိုးခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို အသေခံကယ်ပြီးမှ ဘုရားသခင်ကသားတော်ကို ရှင်ပြန်ထမြောက်အသက်ပြန်ရှင်စေပြီး ကောင်းကင်မှာ နေရာပြန် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသားတော်သခင်ယေရှုကယ်တာကို လက်ခံရင်ကောင်းကင်မှာ နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ထားပေးမယ်။ မစိုးရိမ်နဲ့လို့ဂတိပေးထားပါတယ်။ တည်မြဲတဲ့ကောင်းကင်အိမ်မှာနေဖို့ အခုလိုဆုတောင်းပါ။
ဒီလိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့၊ ဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့အတိုင်း ကောင်း ကင်အရပ်မှာ နေရာရသွားပါပြီ။ ၀မ်းသာစရာပါ။ နောက်တစ်ခု ဒီလောက မှာနေ့ တိုင်း ပျော်ရွှင်ဖို့ရာတော့ “သခင်ယေရှု ကျွန်တော့စိတ်ကိုအုပ်စိုးပါ” လို့ နေ့တိုင်း ဆုတောင်း ၀န်ခံရင်တော့ မျက်မြင်အရာတွေအပေါ် ကြည့်ပျော်နေတဲ့အပျော်မျိုးမဟုတ်တော့ပဲ၊ အခြေအနေပေါ်မူမတည်တဲ့ အံ့သြစရာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေ ခံစားလာရမှာပါ။
BE HAPPY! By. Saya Htein Win Ei
Posted by Papa at 9:16 PM
Labels: Christmas, Tract, ခရစ်စမတ်, တရား, ဝေစာ
ခရစ်စမတ် လက်ဆောင် ဝေစာ -
လူတွေအတွက် အရေးအကြီးဆုံး၊ အလိုအပ်ဆုံး၊ တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံး၊ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်တခုကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်က ဘုရားသခင် စတင် ပေးသနားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့အထိလည်း ပေးနေဆဲပါပဲ။ အဲဒီလက်ဆောင်ဟာ…….
ဘုရားသခင်က ဒီလက်ဆောင်ကို စိတ်ကြိုက်လူတချို့ကိုသာ ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးတမျိုးတည်းကိုသာ ပေးခဲ့တာလည်း မဟုတ်ဘူး။
ယောင်္ကျား မိန်းမမရွေး၊ ပျိုပျိုအိုအို၊ ကလေးတွေတောင် ရနိုင်ပါတယ်။ ပညာတတ်တွေကို ပေးသလို၊ ပညာမတတ်သူတွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ လှတဲ့သူ ရနိုင်သလို၊ မလှတဲ့သူလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ အသားအရာင် မခွဲခြားပဲ၊ အသားဖြူ၊ အသားညို၊ အသားမဲ၊ အသားဝါ လူမျိုးစုံကို ပေးနေတာပါ။
ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်ထိုက်သူဆိုတာ လောကမှာမရှိပါဘူး။ အားလုံးရထိုက်သူတွေပါ။
ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ဟာ လောကအရာတွေလို ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမသွားဘူး။ သံချေး၊ ပိုးရွမတက်သလို၊ သူခိုးလည်း ထွင်းဖေါက်မခိုးယူနိုင်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲ? ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ တပါးတည်းသောသားတော်ကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးနေလို့ပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဟာ လူ့လောကကို ကြွလာခဲ့ရတယ်။ အကြောင်းက - လူတွေရဲ့ အပြစ်ကြွေးကို ကိုယ်စား အသေခံပေးဆပ်ပေးဖို့ပါ။
အပြစ်ရဲ့အခဟာ သေခြင်းပါ။ အပြစ်လုပ်သူဟာ သေထိုက်ပါတယ်။ ဘုရားသားတော်က အားလုံးကိုယ်စား လူစားထိုးအသေခံပေးခဲ့ရတာပါ။ အသေခံပေးလို့ င်္သဂြိုဟ်ပြီးမှ ၃ ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ အသက်ပြန်ရှင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ရက် ၄၀ အကြာမှ ကောင်းကင်ထက်ကို ပြန်လည်တက်ကြွတော်မူခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုကြွလာခဲ့တာဟာ `အော်- ငါ့ကို လာကယ်တာပါလား ´ လို့ စိတ်ထဲက အသိအမှတ်ပြုရင်၊ ဘုရားသားတော် ကယ်တင်ရှင်ကို လက်ခံတာ၊ အကယ်ခံတာပါပဲ။
လူလူချင်း လက်ဆောင်ပေးရင် ဘူးတွေနဲ့ ထုပ်ပေးတတ်လို့၊အထဲမှာ ဘာတွေပါသလဲ၊ မုန့်လား? အသတ်အထည်လား? ပစ္စည်းတခုခုလား? ဆိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ဖွင့်ကြရတာပါ။
ဒီလိုပါပဲ။ ဘုရားသခင်က သားတော်ကို ပေးပါတယ်။ သားတော်အထဲမှာ ဘာပါသလဲ? `ထာဝရအသက်´ပါပါတယ်။ `ထာဝရအသက်´ ဆိုတာ ဘာလဲ?..
ထာဝရအသက်ဆိုတာ သေတဲ့နေမှာ ငရဲမလားတော့ဘူး။ အပြစ်ဒဏ်မခံရတော့ဘူး။ မအို၊ မနာ၊ မသေတော့ပဲ ကောင်းကင်ဘုံထက်မှာ ဘုရားသခင်ကို ဖူးမြော်ပြီး၊ ထာဝရ ပျော်ရွှင်စွာ အသက်ရှင်ရခြင်းပါပဲ။
ဘုရားသခင်က ထာဝရအသက်ကို ရောင်းတာမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် အလှူငွေများများပေးပြီး ၀ယ်စရာမလိုပါဘူး။
ဆုပေးတာမဟုတ်လို့ ဘုရားကြိုက်မယ်ထင်တာတွေ ကြိုးစားလုပ်ပြီး မြော်လင့်နေဖို့မလိုပါဘူး။
ဘုရားသခင်က သင့်ကို တရားပြနေတာမဟုတ်သလို၊ ပညတ်တွေ ချပြနေတာမဟုတ်ဘူး။
ဘုရားသခင်က လူတွေကို ကောင်းကောင်းနေစေချင်ပေမယ့် အမိဝမ်းထဲကတည်းက အပြစ်လုပ်ချင်တဲ့ ဗီဇပါနေကြတဲ့ အတွက် ….. `ကောင်းကောင်းနေမှ ပေးမယ်ကွာ´ လို့လည်း အကြပ်ကိုင်တော်မမူပါဘူး။
ဘာသာဝင်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်က သနားလို့ လက်ဆောင်ပေးနေတာပါ။
လက်ဆောင်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ရုံပဲ။ လက်ခံလိုက်ရင် ရတာပါပဲ။ ဘုရားပေးလို့ ကိုယ်ရတာပါ။
ဒါပေမယ့် ပေးတဲ့သူက ဘယ်လောက်ရက်ရက်ရောရော စေတနာနဲ့ပေးပေမယ့် လက်ခံရမယ့်သူက ငြင်းနေရင်တော့ အလကားပဲပေါ့။ ဘုရားကပေးရဲ့သားနဲ့ မရတာဟာ မထိုက်တန်လို့မဟုတ်ပဲ၊ လက်မခံလို့သာ မရတာပါ။ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကို လက်ခံဖို့ရာ အခုလို ရိုးရိုးကလေး ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
သားတော် သခင်ယေရှုကို အခု လက်ခံပါပြီ။
ထာဝရအသက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဘ။´
ဒီလို ဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါ ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ကို ရပါပြီ။ သားတော်ကို ရပြီ။ ထာဝရအသက်ကို ရပြီ။ ဘုရားသခင်က ကျမ်းစာထဲမှာ ဂတိပေးထားပါတယ်။
` ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူ၍ ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏။ သားတော်ကို ရသောသူသည် အသက်ကိုရ၏။ သားတော်ကိုမရသောသူမူကား အသက်ကိုမရ။´ ၁ ယော ၅း ၁၁-၁၂။
By Saya Htein Win Ei.
Posted by Papa at 11:03 AM
ဆုတောင်း လိုက်ပါ - Go Ahead and Ask!
ကိုယ်လိုတာကို ဘုရားသခင်ထံတောင်းဖို့ ကျမ်းစာက သွန်သင်ပါတယ်။ သာမန်ခရစ်ယာန်တွေလည်း တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က လူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်တွေကိုတောင် ရေတွက်ထားတယ်ဆိုတော့ အသေးအမွှားလေးတွေကိုလည်း သတိထားပေးပါတယ်။
`တောင်းကြလော့။ တောင်းလျှင်ရမည်။ ရှာကြလော့။ ရှာလျှင်တွေ့မည်။ တခါးကို ခေါက်ကြလော့။ ခေက်လျှင် ဖွင့်မည်။´ - (မဿဲ ၇း ၇) - - - ` --- မရကြ။ အကြောင်းမူကား ဆုမတောင်းပဲနေကြ၏။´ - (ယာကုပ် ၄း ၂)
`ထာဝရဘုရား၌ မွေ့လျော်ခြင်းရှိလော့။ သို့ပြုလျှင် စိတ်နှလုံးအလို ပြည့်စုံရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူမည်။´ (ဆာလံ ၃၇း ၄)
`သင်တို့သည် ငါ၌တည်၍ ငါ့စကားသည် သင်တို့၌တည်လျှင်၊ သင်တို့သည် တောင်းချင်သမျှကို တောင်း၍ ရကြလိမ့်မည်။´ (ယောဟန် ၁၅း ၇)
`သင်တို့သည် ဆုကျေးဇူးကို ရမည်ဟု ယုံကြည်သောစိတ်နှင့် ဆုတောင်းသမျှတို့ကို ရကြလိမ့်မည်။´ (မာကု ၁၁း ၂၄)
ဘုရားသခင်တောင်းစေချင်တာက … ကြီးမားတဲ့အရာတွေပါ။ ဘုရားဘုန်းတန်ခိုး ထင်ရှားမယ်အရာတွေ တောင်းဖို့ကောင်းတာပေါ့။ များများတောင်းလည်း ဘုရားသခင် ဆင်းရဲမသွားပါဘူး။
`ငါ့ကို ခေါ်လော့။ ငါထူးမည်။ ကြီးသောအရာ၊ သင်မသိနိုင်အောင် နက်နဲသောအရာတို့ကို ငါပြမည်။´ (ယေရမိ ၃၃း ၃)
ဘယ်လောက်တောင်းမလဲ? `ကြီးသောအရာ၊ နက်နဲသောအရာတွေကို´ တောင်းရမှာပါ။ `ကြည့်ရှုလော့။ ထာဝရဘုရားသည် မသယ်မတင်နိုင်အောင် လက်တော်တိုသည်မဟုတ်။ မကြားနိုင်အောင် နားတော်ထိုင်းသည်မဟုတ်။´ (ဟေရှာယ ၅၉း ၁)
ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကင်ရောက်သွားရင် လူ့လောကမှာ ဆုမတောင်းခဲ့တာတွေအတွက် အားမလိုအားမရ ဖြစ်ကြရဦးမှာပါ။
တောင်းသင့်ပါတယ်။ ဒီမနက် ခေါင်းဖီးလို့ ဆံပင်တချာင်းတလေ ကျွတ်ရင်၊ ကောင်းကင်မှတ်တမ်းမှာ အပြောင်းအလဲ ရှိသွားပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတော်ကြာတုန်းက Open Door အသင်းတော်ရဲ့ conference တခုမှာပါ။ မနက်အိပ်ရထမှာ ရီဝေနေလို့ ဆရာဝန်ထံ သွားရပါတယ်။ သွေးနီဥ အားနည်းနေလို့ အားရှိမယ့် အစာတွေ စားဖို့ ဆရာဝန်က တိုက်တွန်းပါတယ်။ စစ်တွင်းကာလဆိုတော့ အသားကြော်က စစ်သားတွေအတွက်ပဲ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်၊ ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာသာ ရနိုင်ပါတယ်။ ခက်တာက ဒီကိုယ်ခန္ဓာကလည်း အသားကြော်ကိုမှ လိုအပ်နေပါသတဲ့။ ဆုတောင်းမိတယ်။ `ကိုယ်တော်၊ ဒီမနက် အိမ်မှာသာဆိုရင်၊ ဇနီးသည်က ဘာစားမလဲလို့ မေးရင်၊ အမဲသားကြော်စားမယ်လို့ တောင်းမိမှာပဲ။ သဘောပြောတာပါ´ လို့ ဆိုမိပါတယ်။
နေ့လည်စာစားရင် ဆိုင်ကလေးတွေမှာသာ စားတော့ အကျန်အကြွင်းတွေ၊ အရောင်တင် ၀က်အူချောင်းတွေ၊ ၀က်ရိုးကလေးတွေသာ စားလေ့ရှိတာပါ။ စားပွဲထိုးအမျိုးသမီးက ` ဒီနေ့ နေလည်စာ ၂ မျိုးရနိုင်ပါတယ်။ ပထမတမျိုးက အမဲချောင်းကြော်၊ ဟင်းရွက်တို့စရာ၊ အာလူးအကြေနဲ့ - - - - ´
`ကဲ.. အဲဒါပဲ ပေးပါ´ လို့ပြောတော့… အမဲသားကြော် ပန်းကန်ပြား အကြီးကြီးတချပ် ယူလာပေးပါတယ်။ ဆုတောင်းရင် အသေးအမွှားတွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အတိအကျတောင်းပါ။ ဘုရားတရားမှာမွေ့လျော်ရင် ဘုရားအလိုတော် သိလာပြီး ဘာတွေတောင်းမလဲဆိုတာ ပိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ယုံကြည်မှုဟာ ကျမ်းစာအပေါ်မှာသာ အခြေတည်ရမှာပါ။
ဆုတောင်းရင် ဘုရားသခင်နဲ့ အခြေအတင် ပြောခွင့်ရှိသလား? ပြောလို့ရပါတယ်။ အာဗြဟံက သောဒုံနဲ့ ဂေါမေရမြို့အကြောင်း ပြောရာမှာ ဘုရားသခင်ကို အခြေအတင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဖြောင့်မတ်သူ ၁၀ ယောက်ရှိရင် သောဒုံကို မဖျက်ဆီးဖို့ ဈေးဆစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ဘုရားသခင် လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
ထာဝရဘုရားက မောရှေကို `မင်းလူမျိုးကို ဂတိတော်ပြည်ထဲကို ခေါ်သွား´ လို့ မိန့်တော်မူတော့ `အဲဒါ ကျွန်တော့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်တော့်လူမျိုးလေ´ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ `အေးပါ။ ငါ ကောင်းကင်တမန်တပါးကို မင်းတို့နဲ့အတူ လွှတ်ပါ့မယ်´ ဆိုတော့ - - `ကောင်းကင်တမန်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ မရင်းနှီးဘူး။ သူ့နာမည်လည်းမသိဘူး။ ကိုယ်တော်မပါရင် ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးလို့´ ပြန်ငြင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်က သူတို့နဲ့အတူ လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ မောရှေက ဘုရားသခင်ကို ဈေးဆစ်ခဲ့သူပါ။
ရှုရိ ဖိနိတ်ပြည်သူ အမျိုးသမီးလည်း ဒီလိုပါပဲ။ နတ်ဆိုးစွဲနေတဲ့ သမီးအတွက် တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ သခင်ယေရှုက - - `သားတွေရဲ့အစာကို မင်းတို့လို တပါးအမျိုးသား ခွေးတွေအတွက် မချပေးသင့်ဘူး´ လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။ (မာကု ၇း ၂၅- ၃၀)
အမျိုးသမီးက - သူဟာ ခွေးတကောင်ဖြစ်ရင်လည်း ကိုယ်တော်ရဲ့ ခွေးပါပဲ။ စားပွဲအောက်က အရိုးအရင်းကလေးတော့ စားချင်ပါသတဲ့။ သူငြင်းတာကို သခင်ယေရှု နှစ်သက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဆုတောင်းတာကို ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် အဖြေပေးသင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်၊ ဆင်ခြေတွေပေးဖို့ ယုံကြည်ချက်လုံလုံလောက်လောက် ရှိနေတာကို ဘုရားသခင် နှစ်သက်ပါတယ်။
ဘုရားသခင် ဘာကိုနှစ်သက်သလဲဆိုတာ ကျမ်းစာနဲ့ သင့်စိတ်နှလုံးမှာ အဖြေရှာဖို့ပါ။
ကြီးမာတဲ့အရာတွေ တောင်းပါ။ ယုံကြည်စွာတောင်းပါ။ ကိုယ်လိုချင်တာ ဘုရားသခင် မပေးဘူးဆိုရင်တောင် ဆက်လိုချင်၊ တောင်းချင်နေသင့်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ - - တောင်းသာ တောင်းလိုက်ပါ။
` --- မရကြ။ အကြောင်းမူကား ဆုမတောင်းပဲနေကြ၏။´ - (ယာကုပ် ၄း ၂) ကိုသတိရပါ။
By Dr. John R. Rice. ( SWORD OF THE LORD, LIX, 18 )
Posted by Papa at 5:15 PM
Labels: Dr. John R. Rice, PRAYER, ခွန်အားယူစရာ, တရား
ဒိုင်နိုဆော . . . Dinosaur
ဒိုင်နိုဆောကို လိုက်ရှာတော့ သိပ္ပံပညာရှင်က အရိုးပဲတွေ့တော့တယ်။ ၄၀% တောင် ပုံဖေါ်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ ဒိုင်နိုဆောမှာ အရောင်အကွက် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။
ကုန်းသတ္တ၀ါတွေကို ၆ ရက်နေ့မှာ ဘုရင်သခင်ဖန်ဆင်းတယ်။ အခုဆို အနှစ် ၆၀၀၀ ကြာပြီ။ ဒါဝင်နောက်လိုက် သိပ္ပံပညာရှင်တချိုကပြောတဲ့ အနှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီဆိုတဲ့ ပုံပြင်ကို မယုံနဲ့။ အဲဒီတုန်းက သူမရှိသေးဘူး။ ရမ်းပြောတာ။
Dinosaur ဒိုင်နိုဆော ဆိုတာ ဂရိစကားကလာတယ်။ “terrible lizard” လို့ ဆိုလိုတယ်။ ကြောက်စရာ ဖွတ်ကြီးလို့ ပြောရမလားပဲ။ နဂါး Dragon လို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှန်းမှာ နဂါးပုံပြင်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒီမှာလည်း မောင်ပေါက်ကျိုင်းနဲ့ နဂါးကြီး ပုံပြင်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း ၂၁ က “great sea monsters . . . ” ငါးကြီး - -ဟာ ရေဒိုင်နိုဆောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ( ဆာလံ ၇၄း ၁၃၊ ဟေရှာယ ၂၇း ၁ )
ယောဘ၀တ္ထု အခန်းကြီး ၄၁ မှာတော့ မီးတွေမှုတ်ထုတ်နိုင်တဲ့ ပင်လယ်နေ လ၀ိသန်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ပျံနိုင်တဲ့ မီးမြွေတွေရှိပါတယ်။ - ဟေရှာယ ၃၀း ၆။ နောက်…. ယောဘ၀တ္ထု ၄၀း ၁၅-၁၉ မှာတွေ့ရတဲ့ ဗေဟမုတ်မြင်း Behemoth ဟာ ကုန်းဒိုင်နိုဆောတမျိုးပါ။
လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ် Ablity to survive ဆက်လက်ရပ်တည် ရှင်သန်နိုင်စွမ်း ရဖို့လိုပါတယ်။ တချို့ကုန်းသတ္တ၀ါတွေနဲ့ သစ်ပင်တွေဟာ နောဧခေတ် ရေလွှမ်းမိုးရာမှာ မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ အခြေအနေသစ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်စွမ်း မရှိကြလို့ပါ။
ဒိုင်နိုဆောတွေ မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်ရတာ အဓိက ၂ ချက်ရှိပါတယ်။
၁။ ရေလွှမ်းမိုးပြီးတဲ့နောက် ရေခဲခေတ် Ice Age မှာ အစားအစာ ရှားပါးလာတယ်။ မြက်တွေ၊ အရွက်တွေ ရှားလာတော့ သတ်သတ်လွတ်စားတဲ့ ဒိုင်နိုဆောလို သတ္တ၀ါကြီးတွေအတွက် မျိုးတုန်းသွားရတယ်။
၂။ တခါ ဒိုင်နိုဆောတွေက လူတွေနဲ့ ပြေလည်အောင် မနေတတ်ကြဘူး။ ပုံပြင်တွေထဲမှာ နဂါးကို သတ်နိုင်ရင် သူရဲကောင်းလို့ အမွှမ်းတင်ခံရလာတယ်။
သင်ခန်းစာယူစရာကတော့ အခြေအနေသစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေ၊ ပြီးတော့ သူတပါးနဲ့ အသင့်အတင့်နေတတ်ဖို့၊ တည့်အောင်ပေါင်းဖို့ပါပဲ။
ဆင် . . . . .
`အချင်းလူပျင်း၊ ပရွက်ဆိတ်ထံသို့ သွား၍၊ သူ၏အပြုအမူတို့ကို ဆင်ခြင်သဖြင့် ပညာရှိစေလော့။ ပရွက်ဆိတ်သည် ဆရာမရှိ၊ ပဲ့ပြင်သောသူမရှိ၊ မင်းမရှိဘဲလျက်၊- နွေကာလနှင့် စပါးရိတ်ရာကာလ၌ မိမိစားစရာအစာကို ရှာဖွေသိုထားတတ်၏။´ သုတ္တံ ၆း ၆-၈။
Elephant - ဆင်
ဘုရားသခင်က လူတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ သွန်သင်ဆုံးမနေရာမှာ၊ တိရစ္ဆာန်တွေကို လေ့လာခိုင်းပြီးတော့လည်း သွန်သင်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကို လေ့လာရင်းနဲ့ လူတွေအတွက် အသိပညာတွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တချို့ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်……
၁။ ဆင် …
အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ …. “Go to the Ant” စကားကိုမှီးယူပြီး၊ ဆရာတင်ရမှာဆိုတော့ “Go to the Elephant” (သို့) “Go to Dr. Elephant” လို့ ဆိုကြပါစို့။
“Go to Dr. Elephant” ဒေါက်တာ ဆင်ထံသွား လေ့လာကြပါစို့။
ဆင်က ရေသောက်ရင် ဂါလံ ၄၀ နီးပါးသောက်တယ်။ အသီးအရွက်၊ အကိုင်းအခက်၊ မြက်တွေကို အစုံစားပါတယ်။ ထူးခြားတာက အသားမစားပဲ ကုန်းသတ္တ၀ါတွေထဲမှာ ကိုယ်ထည်အကြီးဆုံးဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် လူမှာလည်း အများလိုပဲ လိမ်မှ၊ ညာမှ၊ လုမှ၊ ညစ်မှ၊ အနိုင်ကျင့်တာ၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှ ကြီးပွါးမယ်လို့ မှတ်ထင်မထားပါနဲ့။ ရိုးသားစွာ အသက်ရှင်ရင်း အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဆင်တွေဟာ အုပ်စုလိုက်သွားလာတတ်ပြီး၊ အများအားဖြင့် အာဏာရှိတဲ့ အမက ဦးဆောင်တတ်ပါတယ်။ အားကြီးပေမယ့် သီးခြားတယောက်တည်းမနေပဲ၊ သံယောဇဉ်နဲ့နေပြီး၊ အုပ်စုရဲ့ အကွယ်အကာကို ယူတတ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေဟာ ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်ဖို့ ကြိုးစားတာကောင်းပေမယ့်၊ မိဘ၊ ဆရာ၊မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ အကွယ်အကာကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။
ဆင်တွေကို ယဉ်ပါးအောင် ထိန်းသိမ်း သင်ပြလို့ရပါတယ်။ ဆင်က ရှက်တတ်တယ်။ ဆင်တွေ မိတ်လိုက်ပေါင်းဖေါ်တာကို ဆင်ဦးစီးတွေတောင် မြင်ရခဲတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေဟာ အရှက်မရှိဘူးလို့ အလွယ်ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အရှက်မရှိတဲ့ အထဲမှာ ဆင်တွေ မပါပါဘူး။ ဆင်တွေတောင် ရှက်တတ်တယ်ဆိုရင်.. လူတွေက အ၀တ်အစား၊ အနေအထိုင်မှာ ပိုပြီးရှက်သင့်တယ်မဟုတ်လား? လုံလုံခြုံခြုံနေထိုင်၊ ၀တ်စားသင့်တယ်မဟုတ်လား? `ခပ်သိမ်းသောသူတို့၌ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုနှင့် သစ္စာသံဝါသပြုခြင်းအမှုသည် အသရေရှိစေလော့။´ ဟေဗြဲ ၁၃း ၄။
မကောင်းတာတခုကတော့ ဆင်တွေ စိတ်ဆိုးရင် ကြောစရာကောင်းတာပါပဲ။ လူမှာလည်း တခြားအချက်တွေ သိပ်ကောင်းနေပြီး၊ စိတ်ဆိုးရင်မလွယ်ဘူး၊ ဒေါသကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးကတော့ ပြုပြင်စရာပါ။
Posted by Papa at 4:20 PM